Ejjennoo fi Murtii Walgahii Gumii Tokkummaa Waldoota Oromoo Addunyaa Isa 17ffaa
« Policy Statement on Identity, Scripture and Church Partnership
Murtii Walgahii Geggessitootaa fi Luboota Waldaa Tokkummaa Warra Wangeelaa… »
Walgahiin gumii silaa gumii hafuurraa (conference) waggaa waggaatti godhamuu wal qabatee geggeeffama ture. Bara kanatti garuu gumii hafuuraa Waxabajii, 5, 2012, Magaalaa Minniapolis USA tti godhame irratti baayyinni bakka bu’oota waldaalee argaman lakkoofsa barbaachisuun gadi waan tureef hin milkaa’in hafe.
Walgahiin Gumii kun addatti kan Sadaasa 12-13 bara 2012 magaalaa Las vegas itti waamame, walgahii kana irratti waldoota miseensa tahan keessaa lakkoofsi irra guddaan argamuun, mijuun guutee, bu’uura jireenya Kirstanummaa kan tahe sagalee Waaqayyoon gorfamnee, kadhataa fi gorsi sagalee Waaqayyoo irratti hundaa’e kennamee hafuura tokkummaan jalqabame.
Gumiin kun qabxiilee asiin gadii irratti waliif galuun ejjennoo fudhachuu isaa jaalala Gooftaan beeksisuu barbaada
1) Adeemsa hojii boordii tokkummaa keenyaa gabaasa nuuf dhihaate irratti mare balaa’ee erga goonee, hojiilee hojjetaman rakkoolee mudatan hunda erga hubannee booda, murtiileen hariiroo fi hidhata waldaa warra ELCA wajjin qabnuu fi ejjennoo keenya murtii seera gaa’elaa irratti fudhatan mormu irra deebinee ammas gad jabeessinee akka morminu gumiin sagalee guuttudhaan mirkaneesseera. Seerri ga’elaa akka sagalee Waaqayyoo abboomu, dhiiraa fi dubartii qofa gidduutti kan raawwatu malee hiika kan biraa akka hin qabaanne, yaadni dubbii Waaqayyoon mormu yoo jiraate waldaalee tokkummaa kana keessatti hammataman keessatti fudhatama akka hin qabaanne, fulduratti murtii keenya isadarbes ta’e kan ammaa kana jijjiruuf mareetti akka hin dhihaannee sagalee tokkoon mormii tokko malee waliif galleerra.
2) Hariiroo fi hidhata hojii wangeelaa kan warra ELCA wajjiin karaa miseensotaa qabnu, murtii isaan waa’ee gaa’elaa irratti qaban akka morminu, isaanis akka sagalee Waaqayyootti raawwachuun akka irra jiru dhugaa wangeelaa ija jabinaan itti himaa, ejjennaa keenya qabannee sagalee Waaqayyoo isa dhugaa ija jabinaan itti dubbanna. Waan amantii keenya kanaan wal hin mormine irratti waliin hojjechaa, gara fuulduraatti amantoota keenya barsiifachaa of qopheessuun hidhatni kun gara hamaa kana caalutti utuu hin tarkaanfatin fala ittiin irraa baanu tattaaffii kanaan dura goone caalatti akka jabaannee irratti hojennu, walis jabeessinu irratti waliif galleerra.
3) Madda rakkoo wal dhabbii kanaa cufuu fi dhaloota itti aanutti wangeela qulqulluu dabarsuun kan danda’amu, waan irratti amanne irratti of danda’anii Waaqayyootti of kennuun sabni Waaqayyoo akka of danda’u, waldaaleen hirkannaa waldoota kaanii irra akka bilisooman yoo godhame duwwaa akka tahe itti amanna. Waldaaleen gaaddisa tajaajiulaa fi dhugaba’umsa isaanii danquu kamiinuu jalaa bahanii of danada’uuf murteeffatan akka jajjabaatan deggersa danada’mu hunda in goonaaf, waldaalee fuulduratti gara of danda’nii ofiin dhaabachuu irratti murtii godhan, kanaanis fakkeenya qajeelaa gaarii tahuuf tattaaffii godhan kdhannaan, hamileen, isa waan hundumaa caalu Waaqayyotti kennuun wal jajjabeessina.
4) Haalli fedhe yoo dhalate walii walii keenya gorfachuu wal deeffachuu, waliif obsuun tokkummaa keenya akka jabeeffannu, barbaachisummaan tokkummaa kan bakka bu’oota waldaalee hunda biratti itti amanamee boordii tokkummaa kana caalaatti jebeessuuf, kana caalaa waldoota hafanis hammannee mootummaa Waaqayyoo bablisuuf sagalee guutuudhaan waliif galleerra. Hirmaatotni mo’icha Waaqayyoo nuuf godhe kanaaf galata galachaniiru.
Qabxiileen armaan olitti tuqaman akka jalqabanii nagaan xumuraman, obsaan akka wal dhageenyu, akka wal dhageenyuu fi akka wal hubannu kan godhe Waaqayyoo ha ulfaatu.
Waldaalee miseensa tahanis tahe qaamni dhimma kana hubachuu barbaadan akka ejjennoo gumii tokkummaa kana beekaniif murtoon kun bakka bu’oota waldaaleetiif afaan Oromoo fi afaan Englishiin akka kennamu gumiin murteesseera.
Gumiin bakka bu’ootaa kun obbolootaa Gadaa darbaniif gumii tokkummaa kana geggessaa turanii, bara hojii isaanii xumuratan eebbisuun geggesseeera. Akkasumas namoota koree bulchiinsa boordii tahuun waggootii lamaan itti aananiif hojjetan namoota shan (5) jaalalaa fi marabbaadhaan filatee eebisuudhaan adaraa hojii Wangeelaa itti kenneera. Isaanis:
1) Luba DR Gammachuu Olaanaa Duraa taa’aa
2) Aadde Faantaayee Saarkaa I/a Dura taa’aa
3) Obbo Toleeraa Bayyanaa Barreessaa
4) Obbo Abraham Dinqaa Abbaa Dingdee
5) Luba Haroo Guyyoo Miseensa
Obbollotni kunis amanamummaan hojii Waaqayyoo akka hojjetan fudhatanii jiru.
Ulfinni Waaqa keenyaaf Waaqarratti ha tahuuf
Gumii Tokkummaa Waldaalee Warra Wangeelaa Oromoo
Las Vega, Nevada, USA Sadaasa (Nov 13, 2012)
 Policy Statement on Identity, Scripture and Church Partnership, March 12, 2011, Minneapolis, Minnesota
3. The Portland resolution of the 15th UOEC council on the actions and future direction of the Oromo Churches in their relationship with the ELCA (July 28, 2009)